NgoMsombuluko, Okthoba 13, 2014 Douglas Karr
Emasontweni ambalwa edlule, othile kunethiwekhi yami ye-Facebook ubuze ukuthi yimaphi ama-plugins enkinobho yokwabelana komphakathi ayekhona lapho nge-WordPress. Ngikuthandile ukwenziwa lula kwe- Ukushicilelwa kweJetPack kanye neqiniso lokuthi yathuthukiswa ngabadidiyeli be-Automattic (abathuthukisi be-WordPress); noma kunjalo, noma ngabe izilungiselelo zami zokusingathwa noma i-plugin ethile ikwenze okuzivelelayo kokwabelana kungasizi ngalutho (ngenxa ye- UMichael Stelzner ngokukhomba lokho!). Ngisasebenzisa i-plugin ukuphusha okuqukethwe kumanethiwekhi omphakathi, kepha angisasebenzisi izinkinobho zokwabelana kusayithi.
Sasivame ukusebenzisa i- I-plugin ye-Flare okwakumangalisa impela. Kodwa-ke, inkampani iyishiyile i-plugin futhi manje ithengisa izinkinobho zayo zokwabelana komphakathi njengokubhaliselwe. Insiza ayisebenzi kahle futhi bengilokhu ngigijimela ezinkingeni eziningi ngokwengeziwe ngakho ngakushiya ne-plugin. Kubi kakhulu ngoba esinye sezici ezinhle ukuthi bengingathola amasheya aphelele kunoma yikuphi okuthunyelwe futhi ngithuthukise ikhodi ethile yokuyithumela kwenye indawo kusifanekiso sokuheha abantu abaningi ukuba bafunde.
Ngakho-ke, bekuzingelwa i-plugin enkulu ye-WordPress ezonikeza ngebha enhle yenkinobho eyenziwe ngokwezifiso kanye nokubulawa kwezinketho. Ngenze ukufunda okuningi nokuhlola inqwaba yama-plugins nemikhiqizo futhi ucingo lwaphela ekuthengweni kwe- Izinkinobho Zokwabelana Komphakathi Ezilula zeWordPress.
I-plugin akuyona i- elula ukusetha nokwenza ngezifiso, kepha iwizard yangaphakathi ilula futhi izinketho ezisezingeni eliphezulu ziningi, kufaka phakathi amawijethi wokulandela umphakathi kanye nama-analytics amanye wabelana.
Ngifake isixhumanisi sethu sokuxhumana kulokhu okuthunyelwe - landa ifayela le- Izinkinobho Zokwabelana Komphakathi Ezilula zeWordPress futhi vumela abafundi bakho bakukhuthaze!
Tags: inkinobho ye-facebookgoogle + inkinobhoinkinobho yomphakathiInkinobho yokuxhumana ne-wordpress pluginizinkinobho zenhlaloizinkinobho zokwabelana komphakathi izinkinobho zokwabelana ngokulula izinkinobho zokwabelana kwezenhlaloamamethrikhi wesabelo senhlaloisabelo senhlalo se-wordpress plugininkinobho ye-twitterplugin wordpress